Manamafy Ny Fanereny An’I Google I Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2016 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Български, عربي, Español, English
Sary: Neon Tommy, Flickr
Manana telo volana hisoratany anarana ara-dalàna amin'ny fanjakana ireo orinasa avy any ivelany izay manangom-baovao manomboka ny 1 Janoary ho avy izao araka ny toromarika navoakan'ny Roskomnadzor, sampan-draharaha mifehy ny fampitam-baovao Rosiana. Mety ho sakanana na iharan'ny sazy ara-bola ireo Orinasa tsy manaraka ny toromarika hatramin'ny faran'ny volana Martsa ho avy izao.
Heverina ho mikendry ny Google ny toromarika avy amin'ny Roskomnadzor. Hanomboka amin'ny taona 2017, manana fisoratana anarana manokana ao amin'ny Roskomnadzor ireo tranonkala mpanangona lahatahiry manana mpisera mihoatra ny iray tapitrisa isan'andro mandalo ao aminy ary tafiditra ao anatin'ny lalàna lany tamin'ny volana Jona lasa izany izay manery ihany koa ireo tranonkala mpanangona lahatahiry mba hamaritra ny fahamarinan'ilay vaovao manan-danja mivoaka any amin'ny tranonkala hafa alohan'ny hamoahana azy indray. Google sy Bing, lohamilina fanaovana fikarohana Microsoft, no hany tranonkala mpanangona lahatahiry vahiny manana mpisera mahatratra io tarehimarika io, ary nilaza ireo manam-pahaizana fa tsy mila manova ny fisoratany anarana ny Microsoft rehefa manaraka ny lalàna .
Voasoratra anarana ao Rosia ny raharahan-dokambarotr'i Google , fa ny raharaham-barotra misy filazam-baovao kosa tsy hita ao. Tsy maintsy na manova ny fisoratany anarana efa misy na mamorona sy misoratra anarana tahaka ny orinasa vaovao ny Google, nolazain'ireo manam-pahaizana fa azo atao hatramin'ny volana Martsa izany. Voasoratra anarana amin'ny fomba hafa ny “Microsoft Rus,” anarana LLC an'i Microsoft ao Rosia, araka an'i Sergei Kopylov, filohan'ny Foibe Fandrindrana ho an'ny TLD RU, fisoratana anarana nasionaly ireo sehatra eny an-tampony ao Rosia, ary izany midika fa tsy voatery hisoratra anarana indray na hanoratra anarana orinasa vaovao ilay orinasa.
Na dia ny fanakanana aza no sazy ambony indrindra mety ho atrehin'ny Google, dia nilaza kosa i Sergei Nosov, mpisolovava ao amin'ny kabinetran'ny lalàna NSN Alliance fa mety hahazo sazy ara-bola koa ny orinasa .
Araka ny tatitry RuNet Echo tamin'ny volana Oktobra, efa manery sahady ny orinasa Rosiana sasany hanaraka ny fepetra vaovao ny lalàna lany tamin'ny volana Jona: Yandex, lohamilina fikarohana Rosiana sady tranonkala mpanangom-baovao izao dia efa noterena hanova ny mombamomba azy sy ny politikan'ny fizarany vaovao ary ny fifanarahany miaraka amin'ireo orinasa 7000 mpampita vaovao mpiara-miasa aminy.